I-Chromecast ye-Windows 10 - Ungalanda kanjani & Usethe - Ungakwenza Kanjani
I-Chromecast iyidivayisi yokusakaza edumile yi-Google. Sonke siyakujabulela ukusakaza okuqukethwe kuthelevishini yethu. I-Chromecast ikwenza kube lula kuwe ukuthi ubuke imibukiso emisha ngaphandle kokuzikhandla. Abantu abaningi banamakhompyutha abo okusakazwa kalula. Abasebenzisi manje bangasakaza kalula okuqukethwe kusuka ku-PC yabo kuya kumadivayisi e-Chromecast. Kuyindlela elula yokusebenzisa ipulatifomu yokuzijabulisa okuhle. Kulesi siqondisi, sizobonisa ukuthi ungasakaza kanjani kalula amavidiyo wakho owathandayo, izithombe, nokunye okuningi kusuka kwiWindows PC.
Amabhokisi amaningi okusakaza we-PC maduze azophelelwa yisikhathi. Uma usuvele unayo i-Chromecast, khona-ke hlola umhlahlandlela wethu wochwepheshe.
Setha i-Chromecast ku-Windows - Umhlahlandlela
Inqubo yokusetha i-Chromecast ilula. Kuyindlela enhle yokubuka noma yikuphi okuqukethwe mahhala. Noma ubani angahlola le divayisi ngokusebenzisa ikhompyutha yakhe. Izinyathelo azisebenzi kalula, futhi noma ngubani angazilandela. Isebenza kuwo wonke amapulatifomu, kufaka phakathi amadivayisi we-Windows 10. Nasi umhlahlandlela wethu wokusetha onguchwepheshe wabo bonke abasebenzisi bewindows. Yizame namuhla ukwehlisa umthwalo wakho ezinkokhelweni zensiza yokusakaza.
Isinyathelo sokuqala siqondile. Abasebenzisi abasha kufanele benze umhlahlandlela wokuqala wokusetha we-Chromecast.Ungayisebenzisa kudivayisi yakho ye-TV. Abasebenzisi badinga ukuxhuma isandiso esincane se-HDMI eceleni kwe-TV yabo. Xhuma i-Chromecast kumthombo wamandla. Izokusiza ukuthi wenze idivayisi isebenze. Manje isilungele ukusakaza okuqukethwe kusuka kunoma iyiphi idivayisi eseduze.
Abasebenzisi abaningi be-intanethi sebevele basebenzisa i-google chrome kwikhompyutha yabo. Inani elingandile labantu lisebenzisa iMicrosoft's Edge, njengami. Kubasebenzisi abanjalo, sincoma ukuthi ulande isiphequluli se-Google Chrome. Kuyimfuneko edingekayo yokuqalisa isici sokusakaza kusuka ku-PC yakho. Idivayisi yeGoogle isebenzisana kahle nesoftware yakwaGoogle.
Abasebenzisi abasha be-Chromecast bangasetha amadivayisi abo ngokusebenzisa amakhompyutha abo we-Windows 10. Awunamzamo futhi awudingi mzamo omkhulu.Kufanele uvakashele isixhumanisi esilandelayo . Kuzokusa ekhasini lokusetha idivayisi. Lapha ungabona ukwaziswa ukusetha i-Chromecast yakho kusuka ku-PC. Kuyindlela eqondile. Chofoza ku- 'Setha i-Chromecast yakho' usebenzisa le nkinobho ye-PC.
I-Chromecast yakho idinga ukuxhumeka kunethiwekhi efanayo ye-WiFi. Kuyindlela elula yokuqinisekisa ukuthi ungasetha khona manjalo idivayisi yakho. Abasebenzisi badinga ukuba kusethingi engenantambo efanayo. Kuyimfuneko ebalulekile yokusakaza kudivayisi ye-Chromecast. Akuthathi umkhawulokudonsa wakho we-Intanethi omningi.
Sithemba ukuthi umhlahlandlela ukwazile ukusula ukungabaza kwakho maqondana nenqubo yokusetha. Kuqondile ukulandela noma ngubani. Qala ukusakaza ku-TV yakho kalula ngale ndlela. Sincoma lokhu kuwo wonke umuntu ojabulela okuqukethwe kwamahhala ku-intanethi. Ilungele ukusakazwa bukhoma.
Ungayisakaza kanjani ngedivayisi yeWindows?
Abasebenzisi be-Windows 10 bangasakaza ku-Google Chromecast ngesiphequluli se-chrome.Kuyindlela elula nephumelelayo yokusebenzisa kwakho. Sincoma ukuthi uzame namuhla. Nazi izinyathelo.
Ungaqala ngokuvakashela noma iyiphi iwebhusayithi enamavidiyo noma okuqukethwe izithombe. I-inthanethi iyindawo ebanzi, futhi ungathola imibukiso eminingi emangalisayo, ama-movie nezithombe ongabelana ngazo. Kungcono ukubuka okuqukethwe kusikrini esikhulu. Ngalesi siqondisi, sivakashela ividiyo engahleliwe ku-Youtube.
Ukusakaza okuqukethwe kusikrini sakho sewebhusayithi, kufanele uchofoze kwesokudla kungxenyekazi. Ilula futhi isebenza kahle kakhulu. Ungabona inketho yokuphonsa khona manjalo. Chofoza inkinobho yokusakaza bese wabelana ngayo kalula ngedivayisi yakho ye-Chromecast. Iphelele kunoma ngubani obuka imibukiso eminingi, ama-movie kukhompyutha yakhe. Futhi kwenza ukusakaza kube lula. Abasebenzisi bangaphatha okuqukethwe ngokusebenzisa imithombo eminingi evela eceleni ku-I-inthanethi.
Ngenye indlela, abasebenzisi bangaphinda bachofoze amachashazi amathathu ngakwesokudla ngaphezulu kwezikrini zabo zesiphequluli. Iletha inketho yokusakaza yamadivayisi we-Windows 10. Sebenzisa lokhu ukwaba isikrini sakho ne-Chromecast kukhompyutha yakho kalula.
Idivayisi ye-Chromecast inezinzuzo eziningi zabasebenzisi bayo. Sincoma ukuthi uzame namuhla ukuze uthole lezi zinzuzo. Ilungele noma ngubani ofuna ukuzijabulisa kwekhwalithi ngentengo ephansi. Nazi ezinye izinzuzo ezibalulekile ze-Chromecast.
1. Sakaza kusuka kumakhulu wezinhlelo zokusebenza
I-Chromecast natively isekela izinkulungwane zezinhlelo zokusebenza zevidiyo nezithombe ze-Android ne-iOS.Ibuye ibe nokusekelwa kwensiza edumile yokusakaza umculo i-Spotify. Noma ngubani angasebenzisa le divayisi ukuthola izixazululo eziphelele zokuzijabulisa. Ifoni yakho inokulawula okugcwele kulezi zinhlelo zokusebenza. Noma ngubani angabelana ngesikrini sakhe nge-inthanethi. Abasebenzisi bangamisa isikhashana, badlale, futhi bandise ivolumu ngocingo lwabo. Itholakala kalula. Zonke izinhlelo zokusebenza zokuzijabulisa ezinkulu njenge-Netflix, i-Amazon Prime Video, i-Youtube isekela isici sokusakaza.
I-Google isebenzela i-ecosystem kuwo wonke amadivayisi ayo. Abasebenzisi manje bangahlanganisa amadivayisi we-Google Home / nest ne-Chromecast yabo.
Kukunika amandla wokubuka imibukiso yakho oyithandayo nemiyalo yezwi. Ungaba nokuzimela okuphelele ngale ndlela. Ungaba nokulawula okugcwele ekusakazeni ngale nsizakalo. Kuyinhlanganisela yokuzijabulisa yanamuhla ephelele. Sincoma bonke abathanda ubuchwepheshe ukubhangqa amadivayisi womabili.
Idivayisi ye-Chromecast yintsha emakethe. Abasebenzisi abaningi bazama izici ezinhle zokudlala ezitholakalayo ngokuthenga. Ungazama izihloko ezidumile ngezinhlelo zokusebenza zokulingisa ezivela eceleni. Isevisi ye-google stadia yenza amageyimu afinyeleleke kalula kuwo wonke umuntu.
Ungaba nesipiliyoni esihle sokudlala ngeChromecast ngalokhu okubhalisile. Izihloko ezizimele njengeJust Dance sezivele zisebenza ngaphandle kokubhaliselwe okwengeziwe.
Vakashela - https://stadia.google.com/ .
Ikusasa liqhakazile kubo bonke abasebenzisi be-Chromecast. Sincoma ukuthi uzame ipulatifomu namuhla ukuthola ulwazi lwe-premium.
I-Chromecast iyidivayisi yokuqala yokusakaza nokusakaza yabafundi abaningi. Kulesi siqondisi, sibonisa ukuthi ungakusakaza kanjani okuqukethwe kusuka kumshini wakho weWindows uye ku-TV. Siyethemba umqondisi wethu uphendula yonke imibuzo yakho. Sicela usazise ngomuzwa wakho wokusakaza ngale divayisi. Yiba nesikhathi esimnandi ujabulela ukuzijabulisa okungenamkhawulo kuzikrini zakho ezinkulu.
Izindawo Zokusakaza Zamahhala ze-Movie (2020) Ngaphandle Kokubhalisa
Izinombolo ze-iPhone 11 Pro Model (A2160, A2215, A2217)